Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwePlatelet Rich Serum - Hielscher Ultrasound Technology
I-plasma ene-platelet ecebile (i-PRP) i-plasma yegazi eye yahanjiswa ngamaplatelets, asetshenziselwa ukwelashwa kwe-medical and estethi.
I-ultrasonic lysis kanye nesimo sengqondo kuyindlela ephumelela kakhulu yokulungisa iplasma ecebile epulletheni.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlelo ezihlukahlukene ze-ultrasonic ezihambisana nezidingo zokwelashwa kwegazi (isb. Ngaphakathi nangaphandle ukulungiselela ikamelo elihlanzekile).
I-platelet i-Rich Serum
I-Sonication iyindlela enokwethenjelwa futhi elula yokwenza ama-platelets e-autologous blood serum ukuze kukhululwe izici zokukhula. Izingxenyana ezithathwe eplatelet – futhi eyaziwa njenge-autologous conditioned serum (ACS) – asetshenziselwa ukulungiswa kwezicubu noma izifo zokwelapha. Ukuze uthole imiphumela ephumelelayo, i-PRP iyasetshenziswa ngaphambi kokujova.
Ukuze ulungiselele i-plasma ecebile ngezici zokukhula kwe-cell, i-sonication iyindlela ephumelela kakhulu futhi ephumelelayo yokwenza i-membrane yeseli futhi ikhulule cishe izici eziphelele zokukhula kwamaseli avela kuma platelet. Nge-lysis ultrasonic kanye nesimiso, ngisho negazi eliphikisanayo lingasetshenziswa.
Ukubeka isimo se-PRP nge-sonication kuyindlela elula futhi engabizi kahle yokuveza izici zokukhula ezigxile.
I-ultrasonic lysis ye-plasma ecebile epulasitiki (i-PRP)
Imiphumela ye-Ultrasonic Lysis
Ukwelashwa kwe-ultrasonic ye-serum yegazi kubangelwa i-lysis ehambisanayo yamaplatelet ukuze kukhululwe izici zokukhula ezingathintekayo (ukukhula kwe-AB (i-PDGF-AB), ukukhula kwesici AA (PDGF-AA), isici sokukhula BB (PDGF-BB), isisulu i-endothelial growth factor (VEGF), iguqula ukukhula kwesici β (TGF-β), i-epidermal growth factor (EGF), i-factor factor growth (IGF), i-epithelial cell factor factor ECGF kanye ne-fibroblastic growth factor (FGF)). Ama-platelets kanye ne-alpha-granules azophazanyiswa yi-sonication, esebenzisa lesi simo i-acoustic cavitation. Ukusebenzisa i-cavitation ye-ultrasonic ye-platelet lysis kunciphisa umthelela omubi ongase ube nawo ekusebenzeni kwezinto zokukhula kwendlela ephindaphindiwe yokuqhafaza.
UP200St – Ama-watts ama-watts angu-200 ama-ultrasonicator anamandla
I-Protocol for Ultrasonic PRP Ukulungiselela
Okungenani. I-16mL yesampula yegazi eqoqwe i-autologous ehlelwe ngokucophelela ishintshwe ngokucophelela izikhathi ezingu-8-10 ku-tube ukuze igazi ne-anticoagulants zixutshwe kahle. Ngemuva kwalokho, isampula i-centrifuged ngo-1800 g ngamaminithi angu-20 ekamelweni lokushisa. Ngemuva kwe-centrifugation, ama-platelet namaseli e-mononuclear zakha ungqimba olumhlophe phansi kwesendlalelo se-plasma, eyaziwa ngokuthi i-plasma ecebile eplasma (PRP). Ingqimba engaphezulu iyaziwa njenge-platelet-poor plasma (PPP). Amaseli e-mononuclear angasuswa noma ahlale esampheni. Ngokuvamile, amangqamuzana e-mononuclear ahlala esampula se-PRP ukugwema izinyathelo ezengeziwe, ezithwala ingozi yokungcola.
Qaphela: Ukwelashwa kwe-ultrasonic ye-PRP ye-autologous kufanele kwenziwe ngaphansi kwezimo eziyinyumba.
I-PRP ne-PPP zihlukanisiwe futhi ziqoqwe. Ku-PPP, isixazululo se-calcium chloride se-1.5mL siyatholakala, kanti ku-PRP 0.5mL 5% i-ethanol ingeziwe. Kokubili ukumiswa kushukunyiswa kahle futhi kuvunyelwe ukuma imizuzu engu-5 ekamelweni lokushisa. Okokugcina, i-1mL PPP ingeziwe ekumiswe kwe-PRP futhi ivunyelwe ukuma kuze kube namafayili e-fibrin clot.
Ukwelashwa kwe-ultrasonic: Njengoba i-gel platelet eyakhiwe yenza njengendawo yamanzi okukhululwa, i-gel fibrin kufanele iphazamiseke ukuze ikhulule izici zokukhula ezitholakalayo. Imingcele ye-ultrasonic lysis nokukhululwa kwezinto ezikhulayo yizinto ezilandelayo: Sonicate nge UP200Ht noma UP200St (200W, 26kHz) nge-sonotrode S26d2 isampula e-tube. Ukuze ugweme ukushisa kwesampula segazi, i-sonication ingenziwa emigqeni yokudonsa (isb. 10 sekh., Ku-30 sec.). Isampula kufanele ibekwe eqhweni ukuze kupholile ukuze izinga lokushisa ligcinwe kahle phakathi kwe-2 – 5 ° C. Ngemuva kwe-sonication, isampula i-centrifuged ngo-16000 g ngamaminithi angu-5. ekamelweni lokushisa. I-supernatant iqoqwe futhi ingagcinwa ku -70 ° C.
Ukuhlushwa kweplatelet engxenyeni ye-PRP kwalungiswa 1.7 – 4.5 faka ngendlela ehlonishwayo uma kuqhathaniswa nesilinganiso sezinombolo zamaplatelet esiphezulu egazini lonke.
I-PRP ihlanganiswe ne-adipose-etholakalayo i-stem cell therapy (i-ultrasonically ikhishwe ama-autologous stem cells avela kumcubu we-adipose, ixubene ne-PRP, futhi ijojelwe emuva emathisini omguli wokulungisa).
I-Hielscher Ultrasonics inguchwepheshe wezobuchwephesha nobuchwepheshe obunokwethenjelwa kwe-ultrasonic. Amadivaysi ethu e-ultrasonic asetshenziselwa umhlaba jikelele ukuze lysis, isisetshenziswa kanye nesampula ukulungiselela – ngokuqondile nangokungaqondile. i-autoclavable kanye ne ilahlwa izesekeli ziqinisekise ukungcola-mahhala ukwelashwa kwe-autologous blood sampuli. Iningi lezinhlelo zethu zingasetshenziswa for lysis ultrasonic of ama-stem cells ne-PRP, okwenza amadivaysi ethu ama-ultrasonic asebenze kangcono nakakhulu nakakhulu.
Leli thebula elingezansi lihlunga amadivayisi wethu we-ultrasonic, afanele ukulungiselela iplasma ecebile eplatelet, kanye ne-volume yesampuli ephakanyisiwe, ngokulandelanayo. Ama-ultrasonicators amakhulu nezinhlelo ezenziwe ngezifiso ziyatholakala, futhi.
I-VialTweeter 200 26 ukuma 0.5 – 1.5
UP50H 50 30 ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.01 – 250
UP100H 100 30 ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.01 – 500
UP200Ht 200 26 ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.1 – 1000
UP200St 200 26 imisiwe 0.1 – 1000
UP400St 400 24 imisiwe 5.0 – 2000
UP200St-SonoStep 200 26 ukuma 30 – 500
I-GDmini2 200 26 ukungcoliswa-free flow cell
Sicela uxhumane nathi namuhla! Sizojabula ukukusiza ukuthola idivayisi enhle kakhulu ye-ultrasonic!
I-GDmini2 ku-UP200St-TD Transducer (ama-watts angu-200)
I-Fortunato, TM; I-Beltrami, i-Ch .; U-Emanueli, C .; De Bank, PA :; I-Pula, G. (2016): i-platelet i-lysate gel kanye nama-progenitors endothelial akhuthaza ukubunjwa kwenethiwekhi ye-microvascular in vitro: izinyathelo zobunjiniyela zobuningi. Sci. Umhlaka 6, 2016.
I-Hamid, i-MSA; U-Yusof, u-Ashril; U-Ali, Mohamed Razif Mohamed (2014): I-Platelet-Rich Plasma (PRP) ye-Acute Muscle Injury: Ukubuyekezwa Okuhlelekile. I-PLOS ONE Volume 9, Issue 2, 2014.
I-Platelet Rich Plasma
I-plasma eline-Platelet ecebile iqukethe i-factor factor AB (i-PDGF-AB), i-platelet etholakalayo ukukhula kwe-AA (PDGF-AA), i-platelet etholakalayo ukukhula kwe-BB (i-PDGF-BB), isisombululo sokukhula se-platefelial (VEGF), okuguqula ukukhula kwe-β (TGF) -β), i-epidermal growth factor (EGF), i-insulin-like growth factor (i-IGF), i-epithelial cell factor factor ECGF kanye ne-fibroblastic growth factor (FGF), okuyizinto ezibalulekile zokukhuthaza ukukhula kwamaseli nokuvuselela.
Isimo se-Autologous Conditioned (ACS)
I-Plasma ebizwa ngokuthi i-Autologous Conditioned Plasma (ACP) iyi-plasma ecebile eplatelet ekhishwa egazini elizenzekelayo elisetshenziselwa ukusekela ukuvuselelwa ngezimo ezihlukahlukene zamazinyo nezinqubo zokuhlinza. I-serum enesimo ilungiselelwa ngokuhlukanisa i-plasma kusuka kwezinye izingxenye zegazi (njenge-erythrocytes), futhi uyigxilise. I-ACP iyi-plasma ecebile eplasma (PRP). I-PRP yigama elijwayelekile lomhlobo we-plasma equkethe ukuhlushwa okukhulu kwe-thrombocytes uma kuqhathaniswa negazi lonke. Ikhishwa egazini lonke. Izingxenye eziyinhloko ze-ACP zihlanganisa i-thrombocytes (amaplatelets), kanye nezici eziningana zokukhula ezidlala indima ebalulekile ekuphuculeni. Ngokungafani nezinye izinhlobo ze-plasma ezicebile zeplatelet, i-ACP ihlukaniswa ukuhlushwa okuphansi kwamangqamuzana egazi amhlophe njengama-neutrophil granulocytes angaphazamisa inqubo yokuphulukisa lapho ekhona ekugxilweni okuphezulu.
Ama-injection e-Platelet-Rich Rich Plasma
I-plasma elineplatelet ecebile isetshenziswa njengomjovo ekudleni okuvuselelayo kanye nasezinkambisweni zezimonyo. Ukusetshenziswa kwe-PRP kuthembisa ukusheshiswa okuphawulekayo kokuphulukiswa kwamasuli nokuthola imisipha. Ngaphezu kwalokho, isetshenziswa ngokuphumelelayo ukuphatha ukuvuvukala, isifo samathambo, ubuhlungu, amanxeba, amanxeba okuphulukisa okuphuthumayo, nokushisa okukhulu kwesikhumba. I-PRP iqukethe izinga eliphakeme lokukhula, okugqugquzela nokuvikela ama-a-cell awo okuphulukisa ama-tissu abonakalisiwe alungiswa.
Ukuze uthole izidakamizwa zezimonyo, i-PRP iboniswe ngempumelelo ukuze kukhuthazwe izinwele, ukuvuselelwa kwesikhumba (eyaziwa nangokuthi ukwelashwa kwe-vampire).
Izinto ezikhungethwe yi-Platelet-Derived Growth (PDGF)
Igama le-platelet-derived growth factor (PDGF) lisho izici PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C kanye ne-PDGF-D. Kuyinto inethiwekhi yokubonisa imigqa emine (PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C kanye ne-PDGF-D), nama-receptors amabili, i-PDGFR-alpha ne-PDGFR-beta.
Izici zokukhula, noma amaprotheni, zilawula ukukhula kwamaseli nokuhlukaniswa. Njengoba i-mitogen eyinhloko etholakalayo kuma-mammalian serum, ekhishwa kuma-plates ngesikhathi sokubunjwa kwe-clot, idlala indima ebalulekile ekwakheni izitsha zegazi (i-angiogenesis), ukukhula kwemithambo yegazi kusuka emathanjeni omzimba aselevele ekhona.